Fizarana fifanarahana arak’asa (contrat de travail) – METFP
Fizarana fifanarahana arak’asa (contrat de travail)
Nisitraka fifanarahana arak’asa (contrat de travail) miisa 500 ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, araka ny velirano napetraky ny Filoham-pirenena Andry Nirina RAJOELINA, ho enti-mampiroborobo ny fanofanana ireo tanora.
Miisa 500 arak’izany ireo noraisina ho Mpiasam-panjakana izay notsogaina tamin’Ireo faritra 22 manerana ny Nosy.
Ny 21 jona 2021 no notolorana tamin’ny fomba ofisialy izany fifanarahana arak’asa izany teto anivon’ny Ministera foibe. Tonga nitso-drano ireo solontenan’ny faritra vao nandray ny fifanarahana arak’asa, Andriamatoa Tale Jeneralin’ny Fanofanana arak’Asa – Atoa RANDRIAHERISOLO Denis – , ny Tale misahana ny maha-olona (DRH) – Atoa RASAMIMANANA Lysias Lyell, ny Tale sy ireo ao amin’ny kabinetra.
« Feno fankasitrahana ny Filoham-pirenana Andry RAJOELINA, ny Praiministra ary ny Ministra ETFP izahay nohon’ny ezaka rehetra nahafahanay nisitraka izao asa izao, ka noraisina ho mpiasam-panjakana. Maro taminay no efa ela no niandrandra izany, misy aza ireo efa hisotro ronono. Manome toky izahay fa hanao antsakany sy andavany ny asanay am-pitiavana sy an-tsitrapo. » Hoy ny solotenan’izy ireo raha nandray fitenenana.
Ireo fepetra sy toromarika teknika kosa no nasian’ny Tale misahana ny maha-olona tsidrim-peo manonkana nandritry ny lahateniny. Ny mason-tsivana no anisany nahasarotony ny Ministra indrindra hoy izy. Na dia teny ihany koa ny fanomanana ireo ECD ho ELD.
Asa manana ny maha izy azy ny asa fanofanana sy fampianarana hoy ny Tale Jeneraly FP, raha nandray fitenenana, ary tokony omena lanja manonkana izany. Nitso-drano azy 70 mianadahy nisolontena ny faritra izy noho izany, nanamafy ny hafatra ny amin’ny mba hazotoan’ireo rehetra amin’ny « Long Life Learning » ho enti-manatsara ny fanofanana ireo tanora, ary nankahery ireo vao nandray fifanarahana arak’asa. Izy raha teo no nisolo-tena an’Andriamatoa Ministra TSIKEL’IANKINA Ernest.
Tao aorian’izao lanonana izao moa, dia nisy ireo toro-marika tsara ho fantatra sy nampitaina tamin’izy ireo, ka ny Tale misahana ny maha-olona sy ireo lehiben’ny sampan-draharaha ao anatin’ny fitaliavana no nanatanteraka izany.
METFP – METALLIKIT : Fanolorana fitaovana hanarenana ny CFP Ampanefena
METFP : Fanadinam-panjakana Brevet d’études Professionnelles (BEP)
Programa Vonjeo ny Tsy An’Asa : 500 mianadahy mianakana no notolorana mari-panofanana
Fihaonana teo amin’ny Loholona sy ny Governemanta